များစွာ မိုဟာမက်မော်စီ'' ကိုယ့်ကိုထောက်ခံသူတွေထဲမှာစနေနေ့သေဆုံးခဲ့သည် အဲဂုတ်တုပွညျရဲ့ မြို့တော်အကြမ်းဖက်မှုများနှင့်ဖြုတ်ချဆန့်ကျင်လူထုအစည်းအဝေးမှာဖြစ်ပွားခဲ့အဖြစ် အစ္စလာမ္မစ် သမတ, Medical နှင့် မွတ်ဆလင်ညီနောင်များ ကပြောပါတယ်.
အဆိုပါသွေးထွက်သံယိုနာရီစစ်တပ်ကကျောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးနောက်သို့လိုက်ကြ၏, မိုဟာမက်အီဘရာဟင်, တစ်ရှည်လျားသော-running ထိုင်-in ကိုသတိပေးခဲ့သည် ကိုင်ရိုမြို့ သမ္မတမော်စီသစ္စာခံများကအဆုံးသတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း “ပညတ်တရား၏အမူဘောင်ထဲမှာ”.
စစ်တပ်ကဇူလိုင်လအပေါ်တစ်ဦးလူကြိုက်များသောကျောထောက်နောက်ခံအာဏာသိမ်းမှုအတွက်သမ္မတမော်စီဖြုတ်ချ 3, နှင့်သောင်းချီသည်မိမိညီနောင်များမှထောက်ခံသူထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကတည်​​းကသူ့ကိုပြန်လည်ရုတ်သိမ်းဖို့တစ်ခိုင်မာသောစိတ်သဘောလေလံအတွက်မြို့တော်ရဲ့ Rabaa Al-Adawiya ဗလီပြင်ပမှာစခန်းချကြပြီ.
အနည်းဆုံး 75 သမ္မတမော်စီကိုထောက်ခံသူတွေရဲနှင့်အခြားနှင့်အတူတိုက်ပွဲများသေဆုံးခဲ့သည် 1,000 စနေနေ့နံနက်အပေါ်ကိုင်ရိုလေဆိပ်ဖို့လမ်းအပေါ်ဒဏ်ရာရ, တစ်ဦးအစ္စလာမ္မစ်-စည်းရုံးလယ်ကွင်းဆေးရုံတွင်ဆရာဝန်များကဆိုသည်.
တစ်ဦးကညီနောင်များခေါင်းဆောင်, Murad အလီ, ရဲတပ်ဖွဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှကျည်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းအေအက်ဖ်ပီကိုပြောပါတယ်, ဒါပေမဲ့တရားဝင် MENA သတင်းအေဂျင်စီကရဲကိုမဆိုတိုက်ရိုက်ကျည်ဆံတွေအသုံးပြုငြင်းပယ်အဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ဘဲလုံခြုံရေးအရာရှိတဦးကကိုးကား.
Running တိုက်ပွဲများကိုင်ရိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်အားလမ်းပေါ်တွင်အရုဏ်မှာထွက်ချိုးဖဲ့, ရဲတပ်ဖွဲ့ကျောက်ပစ်ဆန္ဒပြသူများမှာမျက်ရည်ယိုဗုံးများပစ်ခတ်နှင့်အတူ, MENA ကပြောပါတယ်.
Buckshot ပစ်ခတ်ခဲ့, ဒါပေမယ့်အရာဘက်မှမသိရသေးခဲ့သည်.
အာဏာသိမ်းမှုထောက်ခံသူတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏လည်းလက်ဇန္ဒြီးယား၏မြေထဲပင်လယ်မြို့များ၏လမ်းများယူ, ခုနစျပါးကလူဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသည်ဟုပြင်းစွာသောအတိုက်ပွဲများညိုအုန်းမြင့် 194.
ကြားဖြတ်အစိုးရပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးစစ်တပ်ကကျောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့အစိုးရကကိုင်ရို၏ Nasr မြို့ခရိုင်အတွင်းအစ္စလာမ္မစ်ဆန္ဒပြစခန်းဖွင့်ကိုချိုးဖျက်ဖို့အလျင်အမြန်ရွှေ့မယ်လို့ပြောပါတယ်အဖြစ်သွေးထွက်သံယို လာ. ,.
“မကြာမီအစိုးရရှေ့နေမှဆုံးဖြတ်ချက်များရှိလိမ့်မည်, နှင့်ဤအခြေအနေကိုအဆုံးသတ်ပါလိမ့်မည်,” မိုဟာမက်အီဘရာဟင်ဂြိုဟ်တုရုပ်မြင်သံကြားရုပ်သံလိုင်းက Al-Hayat သို့ပြောသည်.
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး Abdel Fattah al-Sisi, သူကအာဏာသိမ်းကြိုးကိုင်, အပေါ်တစ်ဦးနှိမ်နင်းမှုများအတွက်သောကြာနေ့ကထောက်ခံမှုတစ်ဦးအစုလိုက်အပြုံလိုက်ရှိုးဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည် “အကြမ်းဘက်ဝါဒ”.
ကိုင်ရိုမြို့ရဲ့တာဝနျရှိနှင့်စုဝေးစေ Anti-မော်စီဆန္ဒပြသူထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရာပေါင်းများစွာ Tahrir ရင်ပြင် နှင့် Itihadiya သမ္မတနန်းတော်ပတ်ပတ်လည်.
တပ်မတော်-installed သမ္မတ Adly Mansour များအတွက်တစ်ဦးကပြောခွင့်ရသူအရေအတွက်ကပြောပါတယ် “အကြမ်းဖက်ဝါဒ၏ငြင်းပယ်ခံရအတည်ပြု,” MENA ကပြောပါတယ်.
သို့သော်အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်စစ်အာဏာသိမ်းမှုညွန့်ပေါင်းက၎င်း၏ထောက်ခံသူများအားဖြင့်သောကြာနေ့ရဲ့မဲပေးသူသူတို့သည်ဆန္ဒပြပွဲများအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူသောသူသက်သေပြဟုဆိုသည် “လူအသက်ကိုသတ်တတ်သောပယ်ချ, နောက်ကျောသမိုင်းရဲ့ဘီးကိုတင်ထားရန်စလေိုကွောငျးစစ်ရေးဖက်ဆစ်အာဏာသိမ်းမှု”.
အာဏာပိုင်များလူသတ်မှုနှင့်အတူသမ္မတမော်စီတရားစွဲဆိုနှင့်တရားဝင်များအတွက်ထိန်းသိမ်းထားသူ့ကိုရမန်ပြီးနောက်အဆိုပါအကြမ်းဖက်မှုများဆီသို့ရောက် လာ. 15 လက်ထက်. သူကသူ့ဖြုတ်ချခံရပြီးပြီးနောက်နာရီကတည်းကတာဝန်ခံမပါဘဲကျင်းပခဲ့.
သမ္မတမော်စီ၏စွပ်စွဲရပ်တည် “တချို့အကျဉ်းသားများ premeditated လူသတ်မှု, အရာရှိများနှင့်စစ်သားများ” သူသည်စဉ်အတွင်းအကျဉ်းထောင်ထဲကဖဲ့သောအခါအ 2011 ဝါရင့်အင်အားကြီးဖြုတ်ချကြောင်းလူထုအုံကြွမှု မူဘာရက်, MENA ကပြောပါတယ်.
အဆိုပါဖြုတ်ချအစ္စလာမ္မစ်လည်းလျှို့ဝှက်ကြံစည်ခဲ့၏သံသယရှိခဲ့ “မုန်တိုင်းအကျဉ်းထောင်များနှင့်သူတို့ကိုဖျက်ဆီး… အကျဉ်းသားများလွတ်မြောက်ရန်ခွင့်ပြု, မိမိကိုမိမိအပါအဝင်”.
ဇွန်လတွင် 23, တရားရုံးဟားမတ်စ်စစ်သွေးကြွများမူဘာရက်ထွက်အတင်းအကြပ်သော 18 ရက်ကြာလူထုအုံကြွမှုကာလအတွင်းအကျဉ်းသားများလွတ်မြောက် facilitated ကပြောပါတယ်.
Gehad El-Haddad, တစ်ဦးညီနောင်များပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်, ထိန်းသိမ်းရေးအလို့ငှာရှုတ်ချ, မူဘာရက်ရဲ့စစ်အစိုးရကခဲ့ဟုဆို “'' ကျွန်တော်ပြန်အပြည့်အဝတပ်ဖွဲ့အတွက်ပါပဲ။ '' အချက်ပြ”
အဲဂုတ္တုပြည်၌, ၏အာရပ်ကမ္ဘာရဲ့လူဦးရေအများဆုံးတိုင်းပြည် 84 လူဦးရေသန်း, အချို့သေဆုံးခဲ့ပြီအကြမ်းဖက်မှုများကြောင့်လျော့ပါးရေးအတွက်ခဲ့ 200 အာဏာသိမ်းကတည်းကလူ.
စစ်တပ်ကလတ်ဆတ်သောရွေးကောက်ပွဲများမှလာမည့်နှစ်တွင်တစ်လမ်းပြမြေပုံအပေါ်မျှ reneging ရှိလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်သိရသည်.
အနောက်နိုင်ငံအစိုးရများကြီးထွားလာလှိုက်လှဲမှုမရှိနှင့်အတူအဲဂုတ္တုပြည်၌အကျပ်အတည်းစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်, စစ်တပ်ကွောကျရှံ့သောတစ်ဦးအချိန်ကြာမြင့်စွာအာဏာကိုဆုပ်ကိုင်များအတွက် angling စေခြင်းငှါ.
အဆိုပါ ယူနိုက်တက်စတိတ် has decided not to label the army’s overthrow of Morsia“coup”,amove that would trigger an automatic freeze of some $1.5 ဘီလီယံအထိ (1.1 ဘီလီယံယူရို) in aid,aUS official said.
ဤဆောင်ပါး, အဲဂုတ္တုပြည်၌မော်စီဆန္ဒပြပွဲမှာတိုက်ပွဲတွေမှာသေဆုံးခဲ့ဒါဇင်, ကနေစုစည်းတင်ဆက်သည် AFP သို့ နှင့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဤနေရာတွင် posted ဖြစ်ပါတယ်. မူပိုင်ခွင့် 2013 AFP သို့. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး
အဲဂုတ္တုပြည်၌: ‘Dozens Killed’ As Rallies Turn Violent
27382	0 ကိုင်ရိုမြို့, အဲဂုတ္တုပြည်၌, မူဘာရက်, MENA, Morsi, မွတ်ဆလင်ညီနောင်များ, Tahrir ရင်ပြင်, ယူနိုက်တက်စတိတ်
← သွေးဖိအားမူးယစ်ဆေး Boost Brainpower? သင့်ရဲ့ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေ Imagination →